Rabitaanka Shacabka SSC ha la Ixtraamo haddii aad tihiin Isimo, Aqoonyahannadda Lixda iyo Group ka Qabanqaabadda. – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Rabitaanka Shacabka SSC ha la Ixtraamo haddii aad tihiin Isimo, Aqoonyahannadda Lixda iyo Group ka Qabanqaabadda.
Waxaanu si cad idiin ku soo gudbinaynaa rabitaanka shacabka SSC ee xalaasha ah si aan loo derderin oo meel daran lagala dhicin. Waxaa welwel laga qabaa in danta reerka majo xaabis, afduub, iyo galamis ku socdo marka aad eegtid sida wax u socdaan iyo ifafaaladda ka muuqata ee laga dheehan karo wararka kooxaha ( Odayaasha 6, Guddiga Qabanqaabadda shirka gudaha, Isimadda qaarkood). Haddii daacadnimo jirto oo aad u tafaxaydateen geedi socodka iyo ka midho dhalinta shirka Khatuumo 2 waa in laga fiirsadaa goobta shirka iyadoo la tixgelindoono arrimaha nabadgelyadda (security) iyo ku haboonaanta xagga agabka iyo adeeg(logistics and services). Xitaa geed hoostii laga dheeryahay faragelinta labadda bahal waa tallo. Tuurta nin keliya iyo koox gaar ah oo shaki laga qabo looma saari karo danta reerka. Mana ah kuwii eelka dhigay in loo irkado.
Hadal iyo Ilkaba waa la cadeeyaa ee shacabka reer SSC oo dhan meel ay joogaanba waxay doonayaa arrimaha soo socda oo ku saabsan geedi socodka midnimadda iyo juhdiga loogu jiro in laga baxo marxaladdan adag ee ay ku jiraan:
In ay ka tashadaan aayahoodda iyo masiirkooda oo aanay u daba fadhiisan cid kale iyagoo garasho dhab u leh in labo cadow dhexdood galeen. Mid xoog ku haysta iyo mid u hoosaasiye oo baha dil maskaxeed ku haya hadda iyo goor
In ay ka wada shaqeeyaan walaaltinimadoodda iyo nabadgelyadoodda dhexdoodda iyo dadka kale ee dani ka dhaxayso
In aan cid kale u talin oo ay wax ay leeyihiin mar uun arkaan iyagoo somalinimaddii ku dheerayd ligligga haysta
In ay soo ceshadaan karaamaddii, maqaamkii, maamuuskii iyo magacii soomaali ku dhex lahaayeen
In isimadda reerku kaalinta ay ku lahaayeen bulshadda la fadhisiyo kana dambeeyaan rabitaanka bulshadda SSC
Mar haddii doonitaanka shacabku arrimahaas kor ku xusan ku urursanyihiin, ayaa waxaa wajaab ah in aan la barbarmarin oo hawlgalka iyo hayiga iyo himiladda dadka la is waafijiyo. Waajibkaas waxaa laga dhowrayaa in ay ku socdaan kooxda odayaasha ah, guddiga qabanqaabadda oo ixtiraamaan shacabka SSC oo aan loo xagal daacin faragelinta iyo furfurka muuqda ee socday dhowaanahan dambe.
Haddaanu nahay Shacabkii SSC hal waxaan leenahay Odayaasha Isimadda ah. Hal kale na waxaan rabaan in ay dhegaha u furan Odayaasha aqoonyahannadda ah ee Lixda ah, Hal ka dambe na waxaan leenahay kooxda 13ka ah ee qabanqaabadda shirka Khatuumo2.
Odayaasha Isimadda ah waxaanu leenahay:
Adeerayaal waxaad mudan tihiin sharaf, maamuus iyo qadarin hase yeeshee waxaannu idin eeganay dhowr iyo labaatan sanadood oo indhuhu nagu kiin dheeradeen oo aad maalin keliya reerka meel laga negaado nagu furi kari weydeen. Shalay markii aad shacabka SSC masiirkiisa albaabadda isugu xidhateen Buurawadal oo aad wadajir go’aankii aad noo gaadheen ee G/mushqare akhriyey waa taad 24saacadood gudahood war kale Garowe ka soo laliseen oo aad raadkii iyo goaankii waxba kama jiraan ka dhigteen ilayn xor iyo madaxbanaani baan jirin. Waxaad ka marag kacdeen in aad danta reerka kasban kariweydeen.
Adeerayaal markii aqoonyahannadda shirkii Khatuumo ee London oo aan weli dhicin Baaqyadda aad soo saarteen oo ku mucaaridayseen ogaada buug madow bay idinku taala. Baaqa ugu dambeeyaa ee oggolaansha shirka gudaha sida lagu helay iyo juhdiga lagu bixiyey waa laga dheregsanyahay.
Sidaas darteed, adeerayaal aan idiin duceynee fursad siiya shacabka reer SSC dal iyo dibedda oo leh caaqil, sheikh, waxgarad, dhallinyarro iyo waayeel, ciroole iyo caruurba leh in ay ka tashadaan aayaha reerka. Adeeryaal maanta isu kaa ya dayaa oo noo firaaqeeya. Martiqaad baad naga helaysaan maalintaan xajadda meel ku soo kufino si aad xilkiina ah Gudoon iyo Duco aanu idinku karaameeyno. Maanta dadka leh talladda ilayn idinka ay maalintiin meel la ogyahay la hoos galay ee adeerayaal bil ixtiraam isu kay daay. Gogosha meeshaanu dhiganayno iyo cidda aanu ergo ahaan dal iyo dibedda ku casuumayno, agendaha iyo sida aanu shirdoono intaaba marti idin kama nihiin haddii aad tihiin Isimaddii.
Odayaasha Lixda ah Waxaanu leenahay:
Aqoonyahannadda maanta isxilqaamayow, Alle xaalkiina kama dhigo Shimbiri maalin bay dab qaadayow maalintiina buulkeeddii bay gubtey. Sansaanka iyo sida aad u shaqeeynaysaa iyo warwarka suuqa yaal walaac badan iyo suluug bay dadka geliyeen. Daacad haddii aad isu tihiin fadeexda iyo xaqlinta jirta waa la wada arkaa. Wayeel korkii waa wada Indho. Waxaad ku wada hadsheen wax intiina kale loo qariyey ninka keliyana loo shaaciyey baa shaki weyn leh. Malaha intiina kale iyo kuwa hagardaamadda wada isku jaal baad tihiin. War jiraaba Cakaaru imaan. Prof. Galeydh warkiisu waan cad yahay wuxuuna sheegay wax jira weeye haddii ay tahay faallo la xidhiidha oday, degaan iyo shakhsiyaadba. Bal idinku si raganimo leh oo basaasnimo lahayn ha la idinka arko. Dadweynaha iyo Shacabka SSC waxay sugayaa inquiry aad ka sameeysaan arrintaas jawaab bay idinka fadhiyaan. Ninka aad Kabo ka tolanaysid kuwiisa la eeg. Ogaada Karis xun iyana wax ku la. Guddiga Qabanqaabadda Shirka Khatuumo2 iyana waxaanu leenahay:
Ilmadeerayaal, xilqaanka iyo hawlgalka aad ku jirtaan waa la idinku bogaadinayaa. Dhambaalka aad xabarsantihiin si qeexan baad shacabkii gudaha u gaadhsiiseen meel kastana ugu tagteen. Baahida loo qabo in la wada tashado iyo aqbalnimadda ka timi bulshadeena wax la wada maqlay idinna markhaati ka tihiin.
Ha yeeshee, idinka oo aan kormeerkiina iyo u kuurgalkiina dhammayn baa xagal daac iyo hadal isburinay idinka soo noqdeen siiba goobta shirka. Waxaad moodaa in aad caynaan jileec iyo xajo ku degdeg dhacay. Waxaad moodaa oo kale in aydan tusaale iyo tilmaan fiican oo qeexan ( clear mandate abt your assignment) ka helin odayaasha dhowrka ah ee idiin igmaday hawsha mudan.
Ilmadeeryaalow iyo walaalayaalow xaajaddan la ruugin waa lagu rafaada ee ka dhowra quluulraacinta iyo degdegga. Hogaan raac iyo go’aannadda la xiriira goobta shirka ha ku degdegna kana fiirsada una tallo badsaday oo marka aad ugu liidataan intii idin dirtay kula soo noqda iyo ciddii caqli u saaxiib xorna ah. Hawshaas maanta waa fig tii u dambeysey haddii aay inaga kadibto afka aynu u dhacayna. Xasuus u yeeshay nin aan ku furi doonin yaanu ku rarin.
Maxamed Maxamuud Dheeg
September 15, 2011 at 12:42 pm -
maansha alaah . faallo iyo talo aad u qiimo badan weeye